US operation ပိုင်း Tiktok ကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ Oracle ဆိုတာဘယ်လိုကုမ္ပဏီမျိုးလဲ? - ARAKAN TIME
Home / World News / US operation ပိုင်း Tiktok ကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ Oracle ဆိုတာဘယ်လိုကုမ္ပဏီမျိုးလဲ?
US operation ပိုင်း Tiktok ကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ Oracle ဆိုတာဘယ်လိုကုမ္ပဏီမျိုးလဲ?
by ARAKAN TIME on September 22, 2020 in World News
Tiktok နဲ့ပတ်သက်တဲ့US operation ပိုင်းကို Oracle က Microsoft ထက်ခြေတစ်လှမ်းသာပြီးဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Wall street journal မှ Oracle ဟာ Silicon Valley မှာရှိတဲ့ Trump ရဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီး US မှာ Tiktok ရဲ့ နည်းပညာ ပါတနာဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ ဒီ App ကိုစက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရောင်းဖို့သို့မဟုတ်ပိတ်ဖို့ Deadlines ထုတ်ထားပါတယ်။ Microsoft နဲ့ Oracle က‌တော့ Tiktok ကို Bytedance ထံမှဝယ်ယူဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ TikTok ဆိုသည်မှာလည်း2billion download နဲ့တော်တော်ကြီးတဲ့ Video sharing appတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft ရဲ့အဆိုကိုတော့ Tiktok ကုမ္ပဏီ Bytedance မှပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ The Wall Street Journal နဲ့ Reuters ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အရ Database နည်းပညာနဲ့ cloud system ကိုစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာရောင်းချနေတဲ့ Oracle ဟာ Tiktok ရဲ့ US, Canada , Australia နဲ့ New Zealand မှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေကိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပြီး bidding war ကိုလည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တော့ Microsoft ကိုတောင်ခြေတစ်လှမ်းနောက်ကောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ Oracle ဆိုတာဘယ်လိုကုမ္ပဏီမျိုးလဲ?
Oracle corporation ဆိုတာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ Corporate Organization တစ်ခုပါ။ အဓိက Industry ကတော့ IT industry ဖြစ်ပြီး အဓိကကတော့ Database software ‌ရေးသားတဲ့ကုပ္မဏီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာအပြင် Cloud engineer system အပြင် enterprise အတွက် Software တွေပါရေးသားပါသေးတယ်။ကိုယ်ပိုင် database management system ရှိပြီး 2019 မှာ အမြတ်နဲ့စျေးကွက်အရ ဒုတိယအကြီးဆုံး Software ကုပ္မဏီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကလူသိများတဲ့ Software ကတော့ Oracle database software နဲ့ database management system ဖြစ်ပါတယ်။ Headquarter ကတော့ California ပြည်နည် Redwood shores မှာရှိပါတယ်။
Oracle ကိုအစပိုင်းမှာ Software Development Laboratories အဖြစ် 1977 မှာ Larry Ellison နဲ့ Bob Miner တို့ကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ Ellison ရဲ့ supervisor Ed Oates မှ British နွယ်ဖွား ကွန်ပြုတာသိပ္ပံပညာရှင် Edgar F.Codd ရဲ့ relational database model အကြောင်းသုတေသနစာတမ်းရဲ့စျေးကွက်စီးပွားရေးအလားအလာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးဒေတာတွေအများကြီးကိုအဆင်ပြေတဲ့သိုလှောင်မှုပုံစံအပြင်ဒေတာအထုတ်အသွင်းအမြန်ယူနိုင်တဲ့နည်းပညာကို Codd ရဲ့ data management သီအိုရီပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
1979 ခုနှစ်မှာ အစောဆုံး SQL ကိုသုံးတဲ့ commercial relational database program Oracle ကိုဖြန့်ချီခဲ့ပြီးတော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအသုံးပြုသူကတော့ Dayton ,Ohio နားမှာရှိတဲ့ Wright-Patterson အမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ တီထွင်ကြံဆမှုနဲ့ ကြီးမားတဲ့Marketing တို့ကြောင့်လူသိများပြီး flagship product တွေထုတ်ပြီးချိန် 1982 မှာ Oracle လို့နာမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ 1980 အတွင်းမှာအကြီးအကျယ်ကိုလုပ်ငန်းတွေကျယ်ပြန့်လာပြီး 1986 မှာအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ 1987 ခုနှစ်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး database management ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Oracle database ကြောင့်နာမည်ကြီးလာခဲ့ပေမဲ့ အဓိကကတော့ software ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေဝယ်ယူမှုကြောင့်ချမ်းသာလာတာပါ။သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာOracle ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ ဘီလီယံတန်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းမနည်းပါဘူး။ Peoplesoft (2005), Siebel (2006), BEA (2008), Microsystems (2010) နဲ့ NetSuite(2016) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာတော့ Oracle Virtual Box အနေနဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်။ လက်ရှိ Oracle လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကတော့ Oracle cloud, AI ,Bigdata , Blockchain, IOT နဲ့တခြားသော ရာနဲ့ချီတဲ့ Product နဲ့ serviceပေါင်းများစွားကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုပ္မဏိတစ်ခုပါ။
By ARAKAN TIME at September 22, 2020